I-China 5.0-ton Forklift Trucks Umkhiqizi kanye Nomthengisi | UWilk
WIK Amaloli ama-Forklift angama-5.0-ton
Ukumiswa Standard: Chaoyang 6102 injini udizili
Ukudluliswa ketshezi okumaphakathi naseningizimu
Amafreyimu amabili eminyango yamamitha amathathu
Amathayi amasha amahle
Amathuluzi / iphakethe lensiza
Isingeniso sokusebenza: ukuhlangana kwenjini yokuphuma kwelanga ,, amandla, ukuvikelwa kwemvelo
Ukudluliswa kweSouth Central, ukusebenza okubushelelezi
Ukuqondisa kwe-Linde, isilinda se-hydraulic, i-SMC hood yokuthulisa buthule
I-Hongchang yensimbi esezingeni eliphezulu yomnyango wensimbi, hhayi, okhubazekile
Ukugqoka okusha okuqinile, okuqinile, ukushaqeka okuhle,
Ukumisa okungakhethwa: Injini yeChaoyang, injini yokhuni lwethini
Ngenisa izinjini ze-Islington
Ukudluliswa ketshezi okwenziwa ngesandla
Izingxenye ezimbili u-3.0 m, 3.3 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 m umnyango wozimele
Izingxenye ezimbili u-3.0 m, 3.3 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 m uhla lweminyango yamahhala egcwele
Izigaba ezintathu u-4.5 m, 4.8 / 5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5 m egcwele uzimele womnyango wamahhala
Isondo elisha likagesi / isondo eliqinile, isondo lokuphuma kwelanga / isondo eliqinile, ukuvikelwa kwemvelo isondo eliqinile
Ngokusho kwezimpahla ezahlukahlukene, ukuhlanganiswa kwempahla ehlukile, njenge-side shift, ikliphu yesikhwama sikakotini
Paper roll omfisha, ibhokisi omfisha, njll
WIK The main nemingcele technical
Imodeli. I-WIK50 Imodeli. I-WIK50
Uhlobo lwamandla Udizili. Ubude obugcwele abuyimfoloko mm 3430。
Kukalwe umthwalo kg 5000。 Ububanzi obugcwele mm 2235。
Isikhungo sokulayisha mm 600。 Ukuphakama okuphezulu kakhulu kwemfoloko (eneshalofu lokuvimba) 4380。
Ukuphakamisa ukuphakama mm 3000。 Ukuphakama kohlaka lomnyango mm 2500。
Ukuphakama kwamahhala mm mahhala 205。 Isondo langaphambili. 8.25-15-14PR
Usayizi wemfoloko mm 1220 × 150x60 Amasondo angemuva 8.25-15-14PR
Uhlaka lomnyango lutshekele phambili / 6/12。 Isondo mm 2250。
Ubuncane bokujika i-radius mm 3250。 Isondo eliya phambili isondo / isondo langemuva mm 1470/1700。
Ubuncane be-engeli yokustaka ububanzi besiteshi mm 5500。 Self-isisindo akukho umthwalo Kg 7980。
Ubuncane besiteshi se-engeli engakwesokudla ububanzi mm 2960。 Amandla ebhethri / V / Ah (12/80) × 2
Ukususwa okuncane komhlaba mm 200。 Imodeli yenjini cY6102BG6
Ukuphakama kozimele phezulu mm 2469。 Kukalwe amandla kw / rpm 81/2500。
Ingaphezulu elingaphezulu mm 610。 Ilinganisiwe i-torque Nm / rpm 353/1700。
Ijubane elikhulu lokuhamba ligcwele km / h 26。 Ukuhamba nge-Bodle X mm 102x118
Ijubane eliphakeme lokuphakamisa ligcwele mm / m420 400。 Inani amasilinda 6。
Ukudonsa okuphezulu kugcwele i-KN 51.4。 Ukufuduswa L 5.785。
Ubukhulu bokukhuphuka ikhono% 20。 Umthamo kaphethiloli umthamo L 120。
Ubude obugcwele ngemfoloko mm 4650。 Ingcindezi yokusebenza Mpa 20。
Imisebenzi ye-Forklift inganciphisa ukufakwa kwabasebenzi nokuqina kwabasebenzi, ithuthukise ukusebenza kahle komsebenzi, futhi isebenzise ngokugcwele izikhala zesikhala samakamelo, amakalishi, kanye nezinqolobane. Iphinde ifinyeze isikhathi sokusebenza sokulayisha, ukukhipha impahla, ukuphatha nokufaka isitaki, kusheshisa inzuzo yezimoto nemikhumbi, futhi kuthuthukisa nezinga lokuphepha komsebenzi.
Izikhuhli zomlilo zangaphakathi ngokuvamile zisebenzisa udizili, uphethiloli noma izinjini zegesi kaphethiloli onamanzi ukunikeza amandla. Ziyasinda futhi zizimele. Zisetshenziswa ikakhulu ezindaweni zokusebenza ezinemithambeka emikhulu, imigwaqo engalingani, izinto ezisindayo, nezimo zezulu ezinzima.
Ake ngingenise uhlelo lwe-radiator lwensimbi yangaphakathi yomlilo.
Uhlelo lwe-radiator lubandakanya i-radiator kanye ne-windshield, njll. I-radiator ibizwa nangokuthi ithangi lamanzi, elinezingxenye ezintathu: igumbi lokungena lamanzi, igumbi lokuphuma kwamanzi kanye nomgogodla wokushiswa kokushisa. Uketshezi olupholisayo (amanzi) lugeleza kumgogodla we-radiator, futhi umoya udlula ngaphandle komgogodla we-radiator, ukuze ukushisa okumunce amanzi okupholisa kusuka enjinini yomlilo yangaphakathi kudluliselwe emoyeni wangaphandle, ukuze izinga lokushisa lamanzi okupholisa likwazi yehliswe ukuze isakaze futhi. Umsebenzi wefasitela lomoya ukwenza umoya ungene ngefeni lidlule kurediyetha ukwenza ngcono ukusebenza kwe fan.
Amafolokhi angaphakathi omlilo asebenzisa udizili, uphethiloli, ugesi ophethiloli onamanzi noma izinjini zegesi yemvelo njengamandla, anomthamo wamathani ayi-1.2 kuye kwayi-8.0, nobubanzi besiteshi obusebenzayo obungamamitha ayi-3.5 kuye kwayi-5.0. Uma kubhekwa ukukhishwa kwe-exhaust nomsindo, kuvame ukusetshenziselwa ngaphandle, ama-workshops noma ezinye izindawo ezingenazo izidingo ezikhethekile zokukhipha umoya nomsindo. Ngenxa yokusebenziseka kalula kokugcwaliswa kukaphethiloli, ikwazi ukubona ukusebenza okuqhubekayo kwesikhathi eside futhi ingasebenza ezindaweni ezinzima (njengezinsuku zemvula).
Uma ipompo lamanzi lingasebenzi kahle noma ibanga eliphakathi nendawo phakathi kwesondo lokushayela nesondo eliqhutshwa yi-fan pulley lingalungile, ibhande lizoxega futhi lishelele, ukuze ijubane lesondo eliqhutshwa lehle, ijubane impompo yamanzi izokwehla, futhi izinga lokugeleza kwepompo lamanzi lizokwehla; Umgwaqo uvaliwe futhi ukugeleza kwamanzi akushelelezi; noma ukungasebenzi kahle kwe-thermostat nokusakazwa kwamanzi kohlelo lonke kumisiwe; lezi zinto ezingenhla zizodala ukuthi izinga lokushisa langaphakathi lamanzi lenjini yomlilo yangaphakathi likhuphuke kakhulu, okwenza uhlelo lokupholisa lushise ngokweqile. Ngaphezu kwalokho, injini yomlilo yangaphakathi izofudumeza kakhulu uhlelo lokupholisa ngenxa yezinye izinto ezingasebenzi kahle njengesikhathi esingalungile sokuthungela.
1. Amaloli ama-Forklift mancane ngosayizi, kodwa anokuzinza okuhle futhi alungele ukudonsa. Zisetshenziselwa isikhathi esingenamkhawulo. Zivame ukusetshenziselwa ngaphandle. Uma kuqhathaniswa nezinjini zikaphethiloli, izinjini zikadizili zinezinto ezisebenza kangcono (kulula ukuzishisa ngokweqile ngesivinini esiphansi, amandla wesikhashana, kanye nokusebenza kwesikhathi eside), nezindleko zikaphethiloli eziphansi. Kodwa-ke, zinokudlidlizela okukhulu, umsindo omkhulu, ukufuduka okukhulu, ukuzimela, nentengo ephezulu. Umthwalo ungaba kusuka kumathani we-0.5 kuye kumathani we-45.
2. Amaloli ama-Forklift mancane ngosayizi, kodwa anokuzinza okuhle futhi alungele ukudonsa. Zisetshenziselwa isikhathi esingenamkhawulo futhi zivame ukusetshenziselwa ngaphandle. Izinjini zikaphethiloli zinokubukeka okuncane, ukulungiswa okulula, amandla aphezulu okukhipha, umsindo osebenzayo ophansi nokudlidliza, nentengo ephansi. Kodwa-ke, izinjini zikaphethiloli zinekhono elingcono lesikhashana, ukusebenza kwesikhathi eside, nezindleko zikaphethiloli eziphansi. Umthwalo ungaba ngamathani ayi-0.5 kuye kumathani ayi-4.5.
3. I-forklift (i-LPG ephelele) esetshenzisiwe esindayo esetshenzisiwe (igama eligcwele le-LPG) ifolkoli elindayo elinomthwalo osindayo onedivayisi yokushintsha igesi kaphethiloli, eyehliselwa yaba yi-forklift ye-LPG, engasetshenziswa ukushintsha phakathi kukaphethiloli noketshezi olunamanzi igesi ngokusebenzisa inkinobho. Inzuzo yesibili yama-forklifts e-LPG ukuthi igesi yokukhipha ilungile, futhi igesi kadoti ye-hydrolyzed carbon (CO) ingaphezulu kakhulu kwezinjini zikaphethiloli. Izindleko zikaphethiloli ziphansi (i-15KG kagesi onamanzi ilingana namalitha ayi-20 kaphethiloli), futhi kukhawulelwe emisebenzini yasendlini enqatshelwa kancane kwezemvelo.
Langaphambilini Amaloli ama-Forklift angama-7.0
Olandelayo: I-5.0 ton udizili ongekho emgwaqeni Forklift
I-4.0-5.0ton Diesel forklift
I-WIK30Dual forklift yamafutha